သက်တမ်းက ၂၄ နှစ်..ကိုယ်ဝန် ၃ လ နဲ့အတွင်းရေးမှူးမလေး – Myanmar Breaking News
Homepage / All About Online / သက်တမ်းက ၂၄ နှစ်..ကိုယ်ဝန် ၃ လ နဲ့အတွင်းရေးမှူးမလေး
သက်တမ်းက ၂၄ နှစ်..ကိုယ်ဝန် ၃ လ နဲ့အတွင်းရေးမှူးမလေး
တစ်ခါတုန်းကပါ။ ဝိုင်ထုတ်တဲ့နေရာမှာ ဝိုင်အရည်အသွေး ကောင်းမကောင်း မြည်းရတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ ကွယ်လွန်သွားလို့ လူသစ်အစားထိုးခန့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကြော်ငြာပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ အ၀တ်အစား ဖြစ်ကတတ်ဆန်းနဲ့ ရေချိန်မှန်နေပုံရတဲ့ လူတစ်ယောက် အလုပ်လာလျှောက်ပါတယ်။လူက ကြည့်ရတာ အချိန်ပြည့် မူးနေပုံ ရတယ်ဆိုပြိး ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် ဥက္ကဌက အစပိုင်းမောင်းထုတ်မလို့ လုပ်ပြီးမှ ကြော်ငြာအရ လာလျှောက်တာမို့ ဒီအတိုင်း ပြန်ခိုင်းရင်မကောင်းတတ်တဲ့အတွက် စဉ်းစားပြီး စကားပြောတယ်။
“ကောင်းပြိလေ..ခင်ဗျား အရည်အချင်းကို စမ်းသပ်လို့ ကြိုက်ရင် ခန့် မယ်… ခင်ဗျားကိုဝိုင် တစ်မျိုးစီ ပေးမယ် ။ ခင်ဗျား သောက်ပြီးရင် ၀ိုင်အမျိုးအစားနဲ့ နာမည်ကို ပြောနိုင်ရင် စာမေးပွဲ အောင်ပြီ..ဟုတ်လား…ကဲ စကြရအောင် “
ဦးစွာ ဥက္ကဌက ၀ိုင်တစ်ခွက် ကမ်းပေးလိုက်တယ်… ဒီလူက အနည်းငယ် သောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ ပြောတယ်။ဒါ မြောက်ဘက်တောင်ကုန်းဒေသက စပျစ်နဲ့ ချက်တဲ့ Muscat ၀ိုင်ပဲ..စတီးစည်နဲ့စိမ်ထားတဲ့အပြင် ၃ နှစ်သက်တမ်းလောက်ပဲ ရှိမယ်၊ရောင်းတမ်းတော့ ၀င်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် အဆင့်နိမ့်တယ်”
“မှန်ပါတယ်ဗျာ..ကဲ နောက်တစ်မျိုး စမ်းပြပါဦး “ဥက္ကဌက မှန်ကန်ကြောင်း ပြောပြီး ဒုတိယမြောက် ၀ိုင်ခွက်ကို ပေးလိုက်တယ်။ဆရာက အနံ့ လေးခံကြည့်၊ ပါးစပ်ထဲ တစ်ငုံစာလောက် မော့ပြီး မျက်လုံးလေး အသာမှိတ်ကာ စဉ်းစား ဖြေတယ်။“ဒါကတော့ Cabernet ၀ိုင်ပဲဗျ၊…အနောက်တောင်ပိုင်းက ထွက်တဲ့ စပျစ်သီးကို ချက်ပြီးဝက်သစ်ချစည်ထဲမှာ အပူချိန် ၈ ဒီဂရီနဲ့ လှောင်ထားတယ်၊သက်တမ်း ၈ နှစ်လောက်ရှိလောက်ပြီ..နောက်ထပ် ၃ နှစ်လောက် ဆက်ထားလို့ ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ “
မှန်ပါတယ်ဗျာ..ခင်ဗျား မဆိုးဘူးဗျ၊ ကဲ..နောက်တစ်မျိုး ပြောပါဦး “ဥက္ကဌက မှန်ကန်ကြောင်း ၀န်ခံပြီး တတိယမြောက် ခွက်ကို ကမ်းလိုက်တယ်။“ဒါက Pinot Blanc ရှန်ပိန် အမျိုးအစားဗျ၊အရမ်း ဈေးကြီးတယ်..ဈေးကြီးသလောက်လည်း အတော် ကောင်းတဲ့ အရက်ဗျ “
.ကုမ္မဏီ ဥက္ကဌ အတော် စိတ်ညစ်သွားတယ်။ဒီလူက ကျွမ်းကျင်တာတော့ မှန်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ဥပဓိရုပ်က လူလေးစားဘွယ်ရာ မရှိလို့ မခန့် ချင်တာပါ။
ဥက္ကဌ နောက်ဆုံးအကြံရလာတာနဲ့ သူ့ ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေးကို အချက်ပြ ခေါ်ယူလိုက်တယ်။အသက် နှစ်ဆယ်ကျော်…ရူပါ အပျံစား..ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ 
ရွှေရောင်ဆံပင်ရှိတဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေး အနားရောက်လာတဲ့အခါ..
ဥက္ကဌက နှစ်ကိုယ်ကြားတိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တယ်။အတွင်းရေးမှူးမလေး ခေါင်းငြိမ့်ပြိး ထွက်သွား…သန့် စင်ခန်း ၀င် ရှုရှုပေါက်ပြီး ၀ိုင်ခွက်ထဲထည့်ကာ ပြန်ရောက်လာတယ်။“ကဲပါဗျာ၊ဒါ နောက်ဆုံးပါပဲ၊သောက်ပြီး ပြောပါဦး “ဥက္ကဌက အတွင်းရေးမှူးမလေး ယူလာတဲ့ ခွက်ကို ပေးလိုက်ပြီး ပြောတယ်။စိတ်ထဲမှာ. . . .
ကြည့်ကြသေးတာပေါ့ကွာ၊ဒီလောက် ကျွမ်းတဲ့ ကိုယ့်ဆရာ ဘာပြန်ဖြေမလဲ ‘ ပေါ့။ထုံးစံအတိုင်း ဟိုဆရာက ခွက်ကို အရင်ဆုံး အနံ့ ခံတယ်..
ပြီး တစ်ငုံစာ မော့လိုက်တယ်၊မျက်လုံးလေးမှတ်ပြီးစဉ်းစားတယ် ။တအောင့်လောက် ကြာတဲ့အခါ…“ဒါကတော့ Blonde (ရွှေရောင်ဆံပင်)အမျိုးအစားဗျ၊..သက်တမ်းက ၂၄ နှစ်..ကိုယ်ဝန်၃ လ နဲ့ ဗျို့…သူဌေးမင်း…ကျုပ်ကို အလုပ်ခန့် ရင်ခန့် ဗျ၊ မဟုတ်လို့ ကတော့
ကလေးအဖေ နာမည်ကိုပါ ဖော်လိုက်မှာ “
Credit-Lu Lu Zaw
တဈခါတုနျးကပါ။ ဝိုငျထုတျတဲ့နရောမှာ ဝိုငျအရညျအသှေး ကောငျးမကောငျး မွညျးရတဲ့ ကြှမျးကငျြသူ ကှယျလှနျသှားလို့ လူသဈအစားထိုးခနျ့ရနျ လိုအပျကွောငျး ကွျောငွာပါတယျ။ မကွာခငျမှာပဲ အဝတျအစား ဖွဈကတတျဆနျးနဲ့ ရခြေိနျမှနျနပေုံရတဲ့ လူတဈယောကျ အလုပျလာလြှောကျပါတယျ။
လူက ကွညျ့ရတာ အခြိနျပွညျ့ မူးနပေုံ ရတယျဆိုပွိး ကုမ်မဏီပိုငျရှငျ ဥက်ကဌက အစပိုငျးမောငျးထုတျမလို့ လုပျပွီးမှ ကွျောငွာအရ လာလြှောကျတာမို့ ဒီအတိုငျး ပွနျခိုငျးရငျမကောငျးတတျတဲ့အတှကျ စဉျးစားပွီး စကားပွောတယျ။“ကောငျးပွိလေ..ခငျဗြား အရညျအခငျြးကို စမျးသပျလို့ ကွိုကျရငျ ခနျ့ မယျ… ခငျဗြားကိုဝိုငျ တဈမြိုးစီ ပေးမယျ ။ ခငျဗြား သောကျပွီးရငျ ဝိုငျအမြိုးအစားနဲ့ နာမညျကို ပွောနိုငျရငျ စာမေးပှဲ အောငျပွီ..ဟုတျလား…ကဲ စကွရအောငျ “
ဦးစှာ ဥက်ကဌက ဝိုငျတဈခှကျ ကမျးပေးလိုကျတယျ… ဒီလူက အနညျးငယျ သောကျကွညျ့ပွီးတဲ့အခါ ပွောတယျ။
“ဒါ မွောကျဘကျတောငျကုနျးဒသေက စပဈြနဲ့ ခကျြတဲ့ Muscat ဝိုငျပဲ..စတီးစညျနဲ့စိမျထားတဲ့အပွငျ ၃ နှဈသကျတမျးလောကျပဲ ရှိမယျ၊ရောငျးတမျးတော့ ဝငျပါတယျ..ဒါပမေယျ့ အဆငျ့နိမျ့တယျ”“မှနျပါတယျဗြာ..ကဲ နောကျတဈမြိုး စမျးပွပါဦး “ဥက်ကဌက မှနျကနျကွောငျး ပွောပွီး ဒုတိယမွောကျ ဝိုငျခှကျကို ပေးလိုကျတယျ။
ဆရာက အနံ့ လေးခံကွညျ့၊ ပါးစပျထဲ တဈငုံစာလောကျ မော့ပွီး မကျြလုံးလေး အသာမှိတျကာ စဉျးစား ဖွတေယျ။“ဒါကတော့ Cabernet ဝိုငျပဲဗြ၊…အနောကျတောငျပိုငျးက ထှကျတဲ့ စပဈြသီးကို ခကျြပွီးဝကျသဈခစြညျထဲမှာ အပူခြိနျ ၈ ဒီဂရီနဲ့ လှောငျထားတယျ၊သကျတမျး ၈ နှဈလောကျရှိလောကျပွီ..နောကျထပျ ၃ နှဈလောကျ ဆကျထားလို့ ရငျအကောငျးဆုံးပေါ့ဗြာ “
မှနျပါတယျဗြာ..ခငျဗြား မဆိုးဘူးဗြ၊ ကဲ..နောကျတဈမြိုး ပွောပါဦး “ဥက်ကဌက မှနျကနျကွောငျး ဝနျခံပွီး တတိယမွောကျ ခှကျကို ကမျးလိုကျတယျ။“ဒါက Pinot Blanc ရှနျပိနျ အမြိုးအစားဗြ၊အရမျး ဈေးကွီးတယျ..ဈေးကွီးသလောကျလညျး အတျော ကောငျးတဲ့ အရကျဗြ “
ကုမ်မဏီ ဥက်ကဌ အတျော စိတျညဈသှားတယျ။ဒီလူက ကြှမျးကငျြတာတော့ မှနျပါတယျ…ဒါပမေယျ့ ဥပဓိရုပျက လူလေးစားဘှယျရာ မရှိလို့ မခနျ့ ခငျြတာပါ။ဥက်ကဌ နောကျဆုံးအကွံရလာတာနဲ့ သူ့ ရဲ့ အတှငျးရေးမှူးမလေးကို အခကျြပွ ချေါယူလိုကျတယျ။အသကျ နှဈဆယျကြျော…ရူပါ အပြံစား..ရှိုကျဖိုကွီးငယျ ကောကျကွောငျးတှနေဲ့ 
ရှရေောငျဆံပငျရှိတဲ့ အတှငျးရေးမှူးမလေး အနားရောကျလာတဲ့အခါ..ဥက်ကဌက နှဈကိုယျကွားတိုးတိုးလေး ပွောလိုကျတယျ။အတှငျးရေးမှူးမလေး ခေါငျးငွိမျ့ပွိး ထှကျသှား…သနျ့ စငျခနျး ဝငျ ရှုရှုပေါကျပွီး ဝိုငျခှကျထဲထညျ့ကာ ပွနျရောကျလာတယျ။
“ကဲပါဗြာ၊ဒါ နောကျဆုံးပါပဲ၊သောကျပွီး ပွောပါဦး “ဥက်ကဌက အတှငျးရေးမှူးမလေး ယူလာတဲ့ ခှကျကို ပေးလိုကျပွီး ပွောတယျ။စိတျထဲမှာ. . . .ကွညျ့ကွသေးတာပေါ့ကှာ၊ဒီလောကျ ကြှမျးတဲ့ ကိုယျ့ဆရာ ဘာပွနျဖွမေလဲ ‘ ပေါ့။ထုံးစံအတိုငျး ဟိုဆရာက ခှကျကို အရငျဆုံး အနံ့ ခံတယျ..ပွီး တဈငုံစာ မော့လိုကျတယျ၊မကျြလုံးလေးမှတျပွီးစဉျးစားတယျ ။တအောငျ့လောကျ ကွာတဲ့အခါ…“ဒါကတော့ Blonde (ရှရေောငျဆံပငျ)အမြိုးအစားဗြ၊..သကျတမျးက ၂၄ နှဈ..ကိုယျဝနျ၃ လ နဲ့ ဗြို့…သူဌေးမငျး…ကြုပျကို အလုပျခနျ့ ရငျခနျ့ ဗြ၊ မဟုတျလို့ ကတော့
ကလေးအဖေ နာမညျကိုပါ ဖျောလိုကျမှာ “
Previous post တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုနေသော ကျောင်သား/သူများအနက်မှ ကျောင်းသူ(၃)ဦး စာဖြေဆိုနေစဉ် အားနည်း၍မူးလဲ
Next post တူရကီက စွမ်းအင်လုပ်ငန်းနဲ့ ဇိမ်ခံသင်္ဘောတွေ အများကြီး ပိုင်တဲ့ သဌေးကြီးရဲ့ သမီးလေး …. Mina Basaran